Endrey ry Dada sy Mama | Diam-penina
Endrey ry Dada sy Mama
Fiainana — Nampidirin'i fraz @ 13:32
"I Neny nibaby, nitaiza nanasa. I Dada isan'andro torovana miasa"
Eh dia mahavariana ny fitiavan-dray aman-dreny ry namana isany. Tsy mitandro hasasarana sy tsy mba mitsitsitsy mba hahasoa ny zanany. Tsy mitaraina aminao izy raha misy zavatra manjo azy , raha marary izy miteny aminao fa salama foana. Mangataka izay zavatra tinao ianao, miezaka izy ireo ny hanome anao an'iny.
Ny zavatra tsy ho adinoko ary ho tsaroiko mandra-pahafatiko dia indray mandeha izay aho narary , tsy nanam-bola ny ray aman-dreniko tamin'izay, tsy nitaraina aho kanefa hitany natory teo am-pandriana dia nanontany izy hoe fa maninona ianao ? Dia somary reraka ho'a fa matory sy maka aina kely fotsiny.
Dia nandeha izy, i dada io , lasa izy nivoaka tany ivelany tany. Niverina avy izy nitondra calcium sy vitamine ho ahy. Izay vola notahiriziny ho atao tahiry sy vatsy , nolaniany tamiko daholo. Nalahelo aho tamin'izay nefa sady faly ihany koa, satria tsapako fa tia ahy ny ray aman-dreniko.
Ankehitriny raha mbola azoko atao koa arak'izay tratry ny heriko manontolo dia ny hamaly fitia azy ireo zareo. Hiezaka aho mba hampifaly sy hampiadana azy ireo,hampilamin-tsaina hanome azy izay zavatra tsy azony taloha noho izaho.
Ho anareo izay mamaky an'ity, dieny mbola tsy tara loatra raha azo atao, araraoty ny fotoana rehetra na dia kely monja aza , eny fa na dia taratasy kely misy teny mamy fotsiny aza, handraisana anjara amin'ilay teny hoe "valim-babena".
Ka izao no lazaiko :
"Ianareo no naha toy izaho ary matokia ahy fa tsy ho adinoko mandrakizay ianareo."
Misaotra ry Dada sy Mama !
Hmmm - tsy hitako akory izay ambara. Any izay i dada sy i neniko, hihihi.
Misaotra anao mizara zavatra tsara toy izao.
Nampidirin'i pissoa — 20 Apr 2006, 15:09
Be loatra mihitsy ny vitany fa tena tsy ho voavaly intsony. Aiza re no ho-solder-na ny kaonty e?
Nampidirin'i lapino — 20 Apr 2006, 18:24
:'( mahaontsa izy izany rafraz kely,ary ahoana izoky sy zandry,snif,snif
hajao ny ray amandreninao mba ho ela velona ianao
Nampidirin'i niry — 13 Mey 2006, 12:25